वैद्यलाई सीपी बन्दै सकिने त्रासले तनाव
न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०७४ फाल्गुण १३ आइतबार |
काठमाडौँ । सीपी मैनालीको नेकपा माले समाप्त भयो । शहरदेखि गाउँ गाउँमा यस्तै चर्चा चलेको छ । देशभक्त गणतान्त्रिक मोर्चा, युरोपेली युनियनको डलरमा रमायो । चुनावमा जाँदा पार्टी एकताका विरोध सीपी गजुरेलको कमाई राम्रै भयो ।
संघीयता, गणतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि एउटै विचार र राजनीति भएका दलहरुको कार्यगत एकतासँगै पार्टी एकता जरुरी भएर नै माओवादी र एमालेबीच पार्टी एकता अन्तिम बिन्दुमा पुगेको हो । संसद्मा नभएकाहरुबीचमा पनि एकता हुने र सरकारका वामपन्थीहरुलाई खबरदारी गर्न सके राम्रै हो ।
तर, यो एकता दिगो हुने देखिँदैन । युरोपेली युनियन नआउला भन्न सकिँदैन । अहिले उपाय नलागेपछिका दिनमा चुनाव प्रयोग गर्ने र व्यवस्था ध्वस्त पार्नेबीचको एकताको मूल अस्त्र के हो निश्चित छैन ।
माओवादीलाई भद्दे सराप गरेर राजनीति नटिक्ने भएपछि हिजो चोइटो लिएर गएकाहरुको न त कार्यकर्ता बढाएका छन् न त राज्यसत्ताको भण्डाफोर गर्ने शक्ति बढेको छ । अहिले अस्तित्व बचाउन पनि मालेका सीपी मैनाली, क्रान्तिकारी माओवादीका मोहन वैद्यलाई धौधौ छ ।
यहीबेला अक्टोबर क्रान्तिका पक्षधर नेकपा मसाललाई समेत एकतामा ल्याउने गरी मोहन वैद्य र नेत्रविक्रमबीचमा एकता अगाडिको सहकार्य सुरु गर्ने भनिएको छ । तर, सिद्धान्त र विचार यिनको फरक छ ।
पार्टी एकता कुन सिद्धान्त र विचारमा हुने हो कार्यकर्ता दङ्ग छन् । हिजो वामगठबन्धनमा मिलाउन खोज्दा मोहन वैद्यले १५ सिट, सीपी मैनालीले १५ सिट, नयाँ शक्तिले २१ सिट खोज्दा कहीँ न कहीँ अस्तित्वमा रहेनन् ।
काँग्रेससँग चुनावी तालमेल गरेर नयाँ शक्तिले रसुवाबाट प्रदेश सांसद् गोरखाबाट प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा १ सिट हात पारेको छ । अहिले नयाँ शक्तिसमेत वामगठबन्धनप्रति नरम बन्न पुगेको छ ।
तर, संसद्मा स्वतन्त्र भूमिका रहने डा. बाबुरामले बताएका छन् । चुनाव लडेर पनि पत्तासाफ हुने देशभक्त गणतान्त्रिक मोर्चाको हालत के हुने ? अहिले कौतुहलता बढ्दो छ । सीपी मैनालीको मालेको हालत के हुने ? साना दलहरुबाट नेकपा संयुक्त, संघीय समाजवादी, मालेको बहुमत टिम पनि माओवादीमा गयो ।
परिवार दल, अखण्ड नेपाल पार्टी, मुस्कान सेना एमालेमा प्रवेश गरेर चुनाव अगाडि नै सेटल भएका छन् । परिवार दल र नेकपा संयुक्तले एकएक स्थान समानुपातिकबाट संयुक्त पार्टीबाट सांसद् बन्ने भएका छन् ।
तर, अब्बल क्रान्तिकारी बनेर आफ्नो हैसियतको पत्तो नपाउँदा यो अवस्था भयो । पछिल्लो समय वैद्यलाई सीपी बन्दै सकिने त्रासले तनाव बनाएको छ ।